Dekedda Boosaaso oo weli muran ka taagan yahay – Bosaso Times News
Dekedda Boosaaso oo weli muran ka taagan yahay
admin November 13, 2017 Dekedda Boosaaso oo weli muran ka taagan yahay2017-11-13T16:01:35+00:00 Puntland No Comment
Waxaa wararka laga helayo dekedda Boosaaso ay sheegayaan in weli ay socoto muran ka taagan maamulidda dekedda iyo kharashyada lagu kordhiyey kaas oo laysku mari waayey ganacsatada iyo dawladda Puntland.
Waxaa khilaafka ka taagan dekedda Boosaaso uu saameyn ku yeeshay amniga Boosaaso iyo shacabka degan oo ka welwelsan in arinku isu bedelo gacan ka hadal iyo dagaal.
Ganacsatada ayaan ogoleyn lacagaha la sheegay ee shirkadda DP world ay soo kordhisay, iyada oo shirkadduna ku adkeysanayso in lacagtaas lagula heshiiyey dekeddana ay waxay doonaan ka samayn karaan.
Waxaa wararku sheegayaan in wakhtigii dawladda Puntland ay u qabatay inay lacagaha qaar bixiso uu dhamaaday, dawladda Puntlanda ay ka luntay lacag dhan 400,000 oo doolar muddo toban cisho ah oo ay bixinayeen kala bar lacagaha la sheegay in dekedda lagu kordhiyey adeegyadeeda.
http://www.bosasotimes.com/dekedda-boosaaso-oo-weli-muran-ka-taagan-yahay/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/Bosaso-Port.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/10/Bosaso-Port-150x150.jpg 2017-11-13T16:01:35+00:00 adminPuntlandBosaso port,dekedda bosaso,DP World,PuntlandWaxaa wararka laga helayo dekedda Boosaaso ay sheegayaan in weli ay socoto muran ka taagan maamulidda dekedda iyo kharashyada lagu kordhiyey kaas oo laysku mari waayey ganacsatada iyo dawladda Puntland. Waxaa khilaafka ka taagan dekedda Boosaaso uu saameyn ku yeeshay amniga Boosaaso iyo shacabka degan oo ka welwelsan in arinku...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Bosaso port, dekedda bosaso, DP World, Puntland
« Hoonka Dawladda
Talyaaniga oo ku guuldaraysay inay u soo baxaan Cayaaraha Koobka Aduunka 2018. »